Gayyaa 12-12-12 tti Maaltu Raawwatamee? – Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD)
September 4, 2020 September 4, 2020 Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD) Uncategorized
Wubisheet Tayyee (KARDi tiif)
Waxabajii 12/2012 weelliisaa jaalatamaa afaan Oromoo artiist Haacaalu Hundeessaan galgalaa keessa naanoo sa’ati 3:00 irratti rasaasaan rukuatamee ajefamee. Ajjeecha Kanaan walqabatee guyyaa itti aansuu Oromiyaa gutuuti Jequmsa ka’e lubun lammiilefi qabeenyaa uummata barbadaayeera.
Dhiimmuma kanaan wal qabatee namoota kuma sagal ol kan hidhaman yoo ta’u, isaan keessa hooggantoota paarti siiyyaasa morniitota, gaazexesiitota fi lammiilee ogummaa addaa addaa keessaa jiran argamu. Mormiitootni kun, hooggana Oromoo federaalistii Kongiresii kan tahanii xinxalaa siyyaasaa Obbo Jawaar fi miltoota waliin jiran hundii hatatamaan akka gadi lakkiifaman hiriraa guddaan gaafachaa turan.
12/12/2012 irra haanga 20/12/2012
Akka lakkoofsa Itiyoophiaa, Haagayyaa 12/12/2012 irra Jalqabe haanga Haagayyaa 20/12/2012 kan turu fiincilli guutuu Oromiyaatti akka godhamuu qeerroon oromiyaa waamicha godheera jechuudhan namoota beekkamtu biyya aalaa Jiran OMN irra bahaan labsan.
Qabataa Ibsa Fincila
Qabataan ibsa fincila Qeerroo Oromiyaatiin waammame kan Jedhame kun, guyyaa sadeetiif kan turu osoo tahuu, karaan gara magaala guddiiti Itiyoophiaa Fiinfiinnee galchuu cufuu dabaltee oromiyaa gutuutti fincila akka godhamuu ibsaa.
Deebiin karaa motummaa
Waamicha fincila Qeerroo Itti aanee Ibsa komishini feedeeraala polisii keeneen, guuyyaa caqafameen hirirri mormi eeyyama seeraan kan qabuu waan hin Jiraanneef uummatni hojjii idlee qabataman akka raawwatu yaadachiseen boda qaamoota seeraa kana warri cabsan irratti humni nageenyaan seeraa kabachiisuf tarkaanfi fudhachuu akka dirqamu akeekachiise.
Komiishini Polisii Oromiyaa kara isaatin, warri waamicha fincila godhan kaayyoo dhoksaa dhunfaa warri qaban ta’u isaani himee fiinciila kanaan namuu akka hin hirmaannee akeekachise.
Hirirri Guyyaa 12/12/2012
Waamicha karaa Oromiyaa Midiyaa Network (OMN) waammameen itti aanse, godinaa oromiyaa naannoo addaa addaatti hirirri Moormii godhameera. keessatuu bakken deeggeertoota obbo Jawaar Mahaamad fi paartiin ‘OFK’ bali’naan Jiran, goodiina Lameen Haarargee (Bahaa fi Lixa), Arsii lixa, (Asaasaa, Doodoolaa, Adaabbaa, Waabee, Koofalee fi Shaashamannee) hirirri haanga garaagaraa goodhame jira.
Kaayyoon hirirri Mormii maal ture?
Kaayyoon hirirri mormii guyyaa caqafameen Jalqabee guyyaa sadeetiif akka taasiifamu kan waammamee maalif akka tahee maddin odeefannoo ‘OMN’ irra yoo qooratamu, ajjeechaa Artiist Haacaalu itti aansee hooggana Kongiresii federaalisti Oromoo kan tahanii xinxalaa siyyaasaa Obbo Jawaar fi miltoota waliin jiran hundii, akkasuumas warri Oromiyaa keessa ilaalcha siyyassaan hidhaman hundi hatattamaan akka gadi lakkifaman gaafachuu jedha.
Gosa fi Hammam midhan gahee
Akka ripoort komishiini mirga namuumma itiyoophiaa fi dhaaboota wal fakkatan dubbatani guyyaa 12/12/12 Jedhame moggafameetti uummata hirirri naga hiirmaate irra, motummaan tarkaanfi humna ol fudhate lubbuun akka darbee, reebicha fi hidhaa Jabaa raawwatamuun ibsameera.
Maddi odeeffannoo kana ol caqafaman ka’uumsa godhne namoota adda addaa, naannoowwan midhan mudateen dubbiisudhaan riporti gabaaba itti aanuu qopheessu yaalleerra.
Godiinootaa Haararge lameen
Haarargee bahaa magaala Awadaay keessa hojji daldalaan akka jiraaten kan nuuf ibsan obbo Usmaan Sayid Haaj Haasan guyyaa 12/12/12 Jedhamee moggaafameen, Uummatnni magaala Awadaay karaa nagaatiin bahee hidhamtoota siyyaassaa hundii akka gadi lakkiifaman gaafate ture. “haata’u malee…” Jedhu obbo Usmaan “… Humna addaa Oromiyaa fi Raayyaa ittisaa biyyaa walitti qindaa’u dhan dhokaasa bananii namoota Jahaa kan ajjeesan yoo ta’u, namoota sadi immo madaa’ani garaagaruumma guyyaa lamaan lubbuun isaani darbeera.”
Akka jecha obbo Usmaan, obbooleesa quuxxuusu isaani dabalatee namoota lakkoofsa hin beekkamnee yoo madaa’an baayyeen isaan immoo jumlaan hidhamani jiru.
Jiraata magaala Haramaaya fi umriin isaani 65 akka tahee kan nuuf ibsan Sheeh Abdurahmaan Ibraahim “guyyaa 12/12/12 tti uummata Haramaaya hiriraa nagaa bahee irra wannii raawwatame, yeeroo wayyaanne illee nuu mudate kan hin beekneedha” Jedhu.
Sheeh Abdurahmann akka dubbatan kaayyoon hirirri xinxaala siyyassa obbo Jawaar Mahaammad dabalatee hidhamtoota siyyassa ajjeecha Artist Haacaaluu boda hidhaman hatatamaan akka gadi lakkiifaman qofa ture. “guyyaa sana namoota torba hirira nagaa irrati ajjeefamu isaaniitin dhagaheera. Ani garu namoota sadi magaala Haramaaya keessa Jiran rasaasaa humna aaddaa Oromiyaa banameen lubbu isaani akka darbe nan beeka” Jechuudhan wabii ta’u isaani mirkaneessaniru.
Haramaayatti Qeerroo fi Qarree lakkoofsaan hin beekkamne hidhamanifi maatiin gaafatamu dhorkaman akka Jiraniis Sheeh Abdurahmaan dubbataniru.
Jiraata magaala Dirreedhawaa fi maqaan kootiin isa Jalqabaan ‘Niima’ nan Jedha kan jedhan Ragaan Ijaa guyyaa 12/12/12 waayee guyyaa sana akkas jedhu.
“Gayyaan Jalabulti hirira, Rayyaa Ittiisa biyya fi humna aaddaa Oromiyaa naannoo “Haayiskul” Jedhamutti Qubatani ture. Guyyaa 12/12/12 ganamaan Jalqabee waraanni qindaa’e kun shamarran magaala keessa socha’an hunda sababa tokko mle shakkidhan qofa sasaabani hidhuu Jalqaban.
Adde Niima “Xiqqoo ture Hirirri yeeroo adeemsamu moo dhokaasa banamee Uummata nagaa hirira gocha ture keessa dargaggon lama ajjeefaman. Guyyuuma sana Haarartti nama lama akka ajjeefamees oddeffannoo amanamaa qaba”. Jechaan nuuf ibsan.
Jiraata Ciroo fi miseensa <KFO> tahu isaani ifaa kan godhan obbo Eebba Mulugeeta Hagayaa 12/2012 tti haarmeen tokko fi dargaggon umri 17 tokko hirira nagaa yoo adeemsan rasaasaan rukkutaman lubbuun isaani darbeera jedhu.
Maddin keenya kana ol maqaan isaan caqafamee akka ibsanitti, guyyuuma wal fakkaataan magaala Xuulloo keessat nama isaan beekan tokko rasaasaan rukutamee ajeefameera.
Maqaan isaani akka eeramu warra hin barbaanne tokko olmaa galmsoo guyyaa 12/12/2012 hirira nagaa yeeroo geggeessu dargaggon tokko rasaasaan ajjeefame jedhu.
Godina Arsi Lixa
Hojataa bankii fi jiraata Asaasaa akk tahan kan nuu himan Obbo Waareewo Galgaluu Hagayyaa 12/2012tti hirira nagaa guddaa godhame akka ture ibsanii cuubbuudhan nama sadi galaafatamee jedhu. Magaalaa kilo metrii 10 fagaatte jirtu waabee keessaas nama tokko guyyuuma sana akka ajjeefame odeeffannoo akka qaban dubatu.
Jiratu magaalaa Shaashamannee fi maqaan ishee akka eeramu kan hin barbaanne bartaa tokko guyyaa sana Uummanni magaala Shaashamanne, hooggana Oromoo federaalistii Kongiresii kan tahee xinxalaa siyyaasaa Obbo Jawaar fi hidhamtoota siyyaasaa hundii hatatamaan akka gadi lakkiifaman hiriraa guddaa gonnee jeettii. Maddin tun yeeroo xummurtu “Haata’u malee human addaa Oromiyaan dhokaasa bane nama tokko osuma wareggame.”
Hagayyaa 12/2012tti magaaloota hirirri nagaa godina Wallagga godhamee keessa tokkon Wallagga lixa ture. Bara darbee hidhmaa siyyaasaa akka tureef maqaan isaa akka eeramu kan hin barbaanne tokko guyyuuma kana hirira nagaa yeeroo godhamu magaala xiqqiti Billaa keessaa dargaggoon tokko rasaasaan ajeefameera jedha.
Guyyaa 12/12/12 Jedhame moggafameetti uummata hirirri nagaa hiirmaate irra, motummaan tarkaanfi humna ol fudhate lubbuun akka darbee, reebicha fi hidhaa Jabaa akka raawwatamee odeeffannoo funanne ni mulisa.
የመተከል ነውጥ አዘጋገብ